M/Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo kulan la qaatay wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya – Radio Daljir
Abriil 2, 2013 9:59 b 0
?Muqdisho, 02 April 2013 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Max?uud ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Muqdisho wakiilka gaarka ah ee ururka midowga Afrika u qaabilsan arimaha Soomaaliya Max?ed Salax Annadif.
kulanka ayaa waxaa ay labada masuul ?uga wada hadleen ?dardargalinta hawlgalka AMISOM ee ururka midowga Afrika uu ka wado dalka Soomaaliya.
Markii uu soo gabagaboobay kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ?iyo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika Max?ed Saalax ayaa waxaa warbaahinta shir jaraa?id u qabtay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya oo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan.
Wakiilka ayaa sheegay iney madaxweynaha ka wada hadleen sidii loo dardar galin lahaa hawlgalka ciidamada AMISOM ay ka wadaan dalka Soomaaliya kaasoo ?lagula dagaalamayo ururka Alshabaab oo ku sugan qaarka mid ah Gobolada dalka ?Soomaaliya.
Wakiilka midowga Aftica ayaa sheegay inay ? ka go?an tahay ?sidii Alshabaab laga saari lahaa guud ahaanba ?dalka Soomaaliya ?waxaana uu ?intaas ku daray in midowga Afrika uu soo kordhinayo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM si ay u dhamaystiraan hawlgalada ?ay ka wadaan Dalka Soomaaliya.
Waa markii labbaad oo ay labada masuull kulan midkaan la mid ah ku qaataan magaalada muqdisho tan iyo markii la soo magacaabay wakiilka midawga Africa ?u qaabilsan Dalka Soomaaliya Max?ed Salax Annadif.